Inona ny IoT?
Internet ny zavatra (IoT) Tsy nieritreritra afa-tsy ny biby fiompinay niresaka taminay izahay fa efa mba nieritreritra ve ianao hoe ny tranonao miresaka aminao na ny fiaranao, ny varavarana miresaka amin'ny jiro! ny Internet izany no nahatonga izany hampifandray saika ny zava-drehetra manodidina antsika. Ny vata fampangatsiahana, ny milina fanasan-damba, ny microwave ary na dia ny vilany aza, ankehitriny dia tsy misy zavatra tsy azon'ny tontolo nomerika.
Manan-danja amin'ny IoT amin'ny sehatra maro samihafa?
Efa nieritreritra ny biby fiompinay niresaka taminay izahay fa efa mba nieritreritra ve ianao hoe ny tranonao miresaka aminao na ny fiaranao, ny varavarana miresaka amin'ny jiro! ny Internet izany no nahatonga izany hampifandray saika ny zava-drehetra manodidina antsika. Ny vata fampangatsiahana, milina fanasan-damba, microwave ary eny fa na dia ny vilaninao aza, tsy misy zavatra tsy azon'ny tontolo nomerika izao. Ny zavatra isan'andro manana ny adiresy IP azy dia tsy ho ela dia ho zava-misy. Ity fifandraisana amin'ny zavatra ity dia lasa vina farany amin'ny teknolojia milaza hanatsara ny fiainantsika. Na izany aza, eo amin'ny dingana voalohany amin'ny IoT isika. IoT dia hanokatra renirano vaovao amin'ny fidiram-bola, modely fandraharahana ary fomba fijery momba ny teknolojia. Amin'ny ambaratonga lehibe kokoa dia mahasoa ho an'ireo mpampiasa tsy miankina manome azy ireo kalitaon'ny fiainana ambony kokoa, fampiononana, fiarovana ary ho an'ny orinasa izany dia hanampy amin'ny fampihenana ny vidiny, hahazoana fahombiazana ary fanaraha-maso tsara kokoa ny orinasany. IoT dia hitondra onja sokajy vaovao eny an-tsena. Ny endrika vaovao amin'ny fifandraisana an-tariby sy ny protocole, ny maodely fandraharahana vaovao miaraka amin'ny vidin'ny fananana, ary ny UI/UX tsy misy manahirana raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy. Ny teknolojia isan-karazany toy ny Wi-Max, Bluetooth, Wifi, Wi-Fi Low Power, LTE, Ethernet mahazatra ary ny Li-Fi farany indrindra, dia efa ampiasaina hampifandraisana ny faritra isan-karazany amin'ny IoT amin'ny sensor fa amin'ity taona ity dia hahita Sigfox, LoRaWAN. ary ny narrowband (NB) 3GPP dia andrana. Ny orinasa, etsy ankilany, dia hahazo tombony lehibe amin'ny IoT. Ny asa lavitra, ny fanaraha-maso ny fanisana ary ny fitantanana, ny fahombiazana sy ny vokatra, ny hafainganam-pandeha ary ny fahafahana miditra, dia faritra vitsivitsy izay hahavita fahagagana ny teknolojia.
Ny fitaovana an-trano an-trano dia mamela ny tompony hifehy sy hanara-maso ny valan-joro mitsivalana toy ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny trano, ny fifehezana ny fidirana, ny filaminana ary ny fahombiazan'ny angovo. Marika maro ao trano hendry dia miara-miasa amin'ny fitaovana isan-karazany hahatonga azy ireo ho marani-tsaina, mahomby kokoa ary azo antoka. Fitaovana maro toa ny Eskesso, vata fampangatsiahana Samsung ary Genican no tena manampy ny fiainan'ny tsirairay amin'ny fomba tsara indrindra. Amazon Echo dia fitaovana marani-tsaina iray hafa miasa ho CPU ho an'ny gadget any an-tranonao rehetra. Fitaovana malaza iray hafa Learning Thermostat, novokarin'i Nest, manitsy ho azy ny mari-pana ao an-trano amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana. Ireo fitaovana ireo dia somary lafo ihany ankehitriny, noho ny vidin'ny fampandrosoana sy ny varotra somary ambany kokoa. Saingy miaraka amin'ny fandrosoana bebe kokoa, antenaina hidina ny vidiny ka hahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny mpanjifa antonony. Vetivety dia afaka nahita mpanampy sy robot manokana nifindra tao an-tranonay koa izahay ary ampahany kely fotsiny io izay hanova an'i IoT. Na dia ao amin'ny karakara ara-pahasalamana indostria, IoT dia manao marika. Ny foto-kevitry ny 'fandriana marani-tsaina' dia ampiharina amin'ny hopitaly vitsivitsy izay afaka mamantatra ny fihetsiky ny marary ary manitsy ny halavany mifanaraka amin'izany mba tsy hisian'ny mpitsabo mpanampy na fitsabahan'ny olombelona. Misy ihany koa ireo mpanafatra fanafody ao an-trano izay manakaiky raha toa ka mihinana ara-potoana ny fanafody na tsia amin'ny alàlan'ny angon-drakitra voatahiry ao anaty rahona. Ireo mpanara-baovao momba ny fahasalamana manampy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny dokotera dia manokatra fomba ihany koa ho an'ireo fitaovana marani-tsaina mba hanome valiny lehibe eo amin'ny sehatry ny karakara ara-pahasalamana. Miaraka amin'ny teknolojia manomboka ampiharina hatraiza hatraiza, dia hahazo valiny lehibe amin'ny fampihenana ny vidiny, ny fanatsarana ny valin'ny fitsaboana, ny fanatsarana ny traikefa amin'ny marary, ny fihenan'ny lesoka, ny fitantanana ny zava-mahadomelina ary ny fanatsarana ny fitantanana aretina.
Ankoatra ny IoT ampiasaina trano hendry, marani-tsaina rafitra fiarovana na fitaovana angovo manome fampiononana sy fiahiana manokana, dia nandroso ho amin'ny fanatsarana ny tanàna. Miaraka amin'ny tanjona hampifandray ny faharanitan-tsaina sy ny fampahalalam-baovao amin'ny fitaovana, ny orinasa isan-karazany dia miasa amin'ny fananganana tambajotran'ny fitaovana mifandray. Ny fitambaran'ny Analytics, angon-drakitra lehibe, ary ny fifandraisana hatraiza hatraiza dia mitondra hery vaovao lehibe toy ny fanaraha-maso sy fitantanana fitaovana, ny fahafahana manara-maso lavitra sy manangana hevi-baovao avy amin'ny angon-drakitra marobe. Noho izany, ny IoT dia manova tanteraka ny fotodrafitrasa amin'ny tanàna amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fitohanan'ny fifamoivoizana, ny fampivoarana ny fitateram-bahoaka, ny famoronana tolotra monisipaly mahomby sy mahomby ary ny fitazonana ny olona hirotsaka an-tsehatra sy ho voaro. IoT dia mampifandray fitaovana maranitra maromaro isan'andro ary amin'ny taona ho avy dia hohodidina manodidina ny 24 lavitrisa isika. Fitaovana IoT. Izao dia vaovao lehibe! Ankoatra ny trano hendry, rafi-pamonjy herinaratra marani-tsaina, fitaovana marani-tsaina koa dia manampy ny olona hanaraka ny fahasalamany manokana miaraka amin'ny tamberina fanatsarana fanafody feno sy feno kokoa. Ny fiara mifandraika dia mifandray amin'ny infra an'ny tanàna marani-tsaina mba hanovana endrika ireo fomba mahazatra izay narahin'ny mpamily taloha. Saingy miaraka amin'ireo tombony ireo koa dia misy ny risika.
Ireo mpikaroka ao amin'ny MIT sy Michigan dia nahita banga be loatra amin'ny fitaovana marani-tsaina marobe izay afaka manome teboka fidirana hackers bebe kokoa handikana ny filaminana. Arak'izany ny orinasa maro kokoa no mametraka ny fiarovana amin'ny vokatra vokariny ho lohalaharana. Taorian'ny fanafihana naterak'ilay Mirai botnet tamin'ny faran'ny taona lasa, antso fanairana ho an'ny rehetra izany ary mila ezaka bebe kokoa amin'ny ho avy mba hitazomana ireo mpijirika. Ny sasany amin'ireo olana ara-piarovana mety ho marihintsika eto dia:
Data angon-drakitra - data be loatra no ampiana isaky ny segondra Fitaovana IoT ary izany dia tena hamorona teboka fidirana ho an'ireo mpijirika amin'ny cyber
Manakana ireo angon-drakitra tsy voahidy - ireo fitaovana mifandraika ireo dia azo hacked mba hanafika ny trano na ny biraon'ny olona. Na metatra an-trano aza dia azo ampiasaina hanarahana ny asanao isan'andro araka ny voaporofon'ny mpahay siansa alemanina
Fahatokisan'ny besinimaro - Tamin'ny 2015, Control State of the Smart Home dia nahalala fa ny olona dia tena niahiahy momba ny fangalarany ny mombamomba azy ireo trano hendry. Mety io no antony iray lehibe mahatonga ny mpanjifa tsy hiova IoT mora foana. The Internet ny zavatra dia ny ambaratonga manaraka ny automatique ary ny fisian'ny teknolojia vaovao dia hanatsara tokoa ny lafiny maro amin'ny fiainantsika na any am-piasana izany na any an-trano. Ity taona ity dia hahita an'i IoT hitombo ho lasa indostrialy amina miliara dolara raha jerena ny olana momba ny filaminana sy ny tsiambaratelo.
ny tetikasa Zava-nisongadina
Manangana sy mivoatra izahay amin'ny asa, fiainana ary fifandraisana. Izahay dia manao tetik'asa amin'ny fikasana hahita vahaolana marani-tsaina sy vaovao amin'ny olana, lehibe na lehibe.